एएफसी कपमा समुह चरण पार गर्ने लक्ष्य हो : छिरिङ गुरुङ (अन्तरवार्ता) - Khelpati
शुक्रवार, चैत्र १५, २०७५ रमेश सुवेदी
घरेलु फुटबलको सर्वाधिक सफल र लोकप्रिय क्लब मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबले अर्को साता एएफसी कप खेल्दैछ । लिग च्याम्पियनको हैसियतमा मनाङले सो अवसर पाएको हो ।
लिग र मोफसलका प्रतियोगिता सकेर मनाङ एएफसी कपको तयारीमा व्यस्त छ । लिग खेलेका खेलाडीमा केही राम्रा खेलाडीलाई थप गर्दै मनाङले एएफसी कपमा नेपाली क्लबको चुनौती पेश गर्नेछ ।
एएफसी कपको समुह इ मा रहेको मनाङले बंगलादेशको अवहानी लिमिटेड, मिनेर्भा पन्जाब र चेन्नई एफसीसंग होम एण्ड अवेका आधारमा खेल्नेछ । घरेलु मैदानमा अवहानीसंग खेल्दै मनाङले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्दैछ ।
लिग जिताउन महत्वपुर्ण भुमिका निभाएका दुई प्रशिक्षक सुमन श्रेष्ठ र विदेशी प्रशिक्षक ताेफे फुजालाई बाहिर राख्दै मनाङले पुर्व अध्यक्ष तथा प्रशिक्षक छिरिङ गुरुङलाई टिमको नेतृत्व सुम्पिएको छ । उनकै नेतृत्वमा मनाङले एएफसी कप खेल्नेछ । पहिलो पटक नेपालबाट एएफसी कप खेल्न लागेको मनाङलाई नयाँ अध्याय लेख्ने जिम्मेवारी छिरिङको काँधमा आएको छ ।
उनी छिरिङसंग मनाङको एएफसी कपको तयारी, खेलाडीको अवस्था, क्लबको लक्ष्य र घरेलु फुटबलमा मनाङको चुनौतीको बिषयमा खेलपाटीकर्मी रमेश सुबेदीले कुराकानी गरेका छन् ।
एएफसी कपको तयारी कस्तो छ ?
एएफसीको लागि सबै खेलाडी हामीसंग भएनन् । त्यसले योजना अनुसार टिमको तयारी अघि बढाउन सकिएन । राष्ट्रिय टिम र यु–२३ का सबै खेलाडी नेपाल फर्किएका छन् । अब अन्तिम तयारीमा जुटेका छौ ।
मिडफिल्डर सुजलको समस्या के हो ? तयारीमा देखिदैनन् त ?
त्यस्तो केही हैन । कुवेतको यात्रामा केही समस्या आएको थियो । आराम गरिरहेको छ । चाँडै फर्कन्छ ।
तयारी सुरु गर्नु भएको कति समय भयो ?
एएफसी कपको तयारी अघि बढाएको दुई हप्ता नाघिसकेको छ ।
धेरै खेलाडी अन्तराष्ट्रिय खेलमा व्यवस्त भए, कति खेलाडीलाई अभ्यासमा पाउनुभयो ?
नेपालको मैत्रिपुर्ण खेल र एएफसी च्याम्पियनसिपले दैनिक ७–८ खेलाडी मात्र उपलब्ध भए ।
धेरै नयाँ खेलाडी टिममा देखिएका छन् । यु– २३ का खेलाडीको बाहुल्यता हो ?
धेरै नयाँ खेलाडी समेत सहभागि छन् । तीन चार जना यु–२३ टिमका समेत छन् ।
एएफसी कपका लागि कति खेलाडी दर्ता गर्नुभएको छ ?
हामीले अहिले २७ मात्रै दर्ता गराएका छौँ । ३५ खेलाडी दर्ता गर्न पाउने नियम छ । तर हामी फाईनल खेलाडी २० जना मात्र राख्नेछौ ।
पहिलो होम खेल्न एक हप्ता बाँकी छ । तयारी कस्तो छ ?
धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने छैन । सबै खेलाडी खेलिरहेका छन् । लिगमा समेत सबैले संगै खेलेका थिए । लगत्तै मोफसलमा समेत खेले । अब कमजोरी मात्र सच्चाउने हो । सायद धेरै समय लाग्दैन होला ।
लिग च्याम्पियन भएपछि क्लब सम्हाल्न आउनुभएको छ । समय छोटो छ । क्लबको लक्ष्य के हो ?
चुनौती त भैहाल्छ । टिमको नेतृत्व गरेपछि लक्ष्यमा सफल हुन्छु भन्नेनै हो । फुटबलमा सबै सोचेजस्तो हुदैन । फुटबल भनेको टिम खेल हो । भाग्य पनि चाहिन्छ । खेलको दौरान के हुन्छ, भन्न सकिन्न ।
क्लबमा नयाँ नेतृत्वसंगै तपाई प्रशिक्षणमा फर्कनुभएको छ । कत्तिको सहजता महशुश गरिरहनुभएको छ ?
नयाँ र पुरानो टिमले मलाई खास फरक पर्दैन । म मनाङकै उत्पादन हो । क्लबमा बसेर खेले, अध्यक्ष सम्म बने । बिस्तारै प्रशिक्षक समेत बने । क्लबलाई आवश्यक पर्दा कुनैपनि समय उपस्थित छु । नयाँ नेतृत्व आएको छ ।
मलाई खेलाडी चाहिएको थियो, त्यो पुरा भएको छ । वर्तमान अध्यक्षसंग मिलेर मैले मेरो कार्यकालमा काम गरेको छु । त्यसैले नयाँ नेतृत्वबाट अझै सहज महशुश गरेको छु । दुई चार जना मेरै कार्यकालमा खेलेका खेलाडी छन् । हामी एक अर्कामा परिपुरक छौ ।
मनाङ लिग च्याम्पियन हुदाँ विदेशी प्रशिक्षक थिए । लगत्तै तपाई आउनु भएको छ । नयाँ खेलाडी भित्राउन वा रिलिज गर्न कत्तिको सहज महशुश भयो ?
सहज नै हुन्छ । हरेक खेलाडीको मनाङ आउने लक्ष्य हुन्छ । मनाङको व्यवस्थापन राम्रो हुने भएकाले सबै खेलाडी आउन सहज मान्छन् । प्रतियोगितालाई भनेर केही खेलाडी हामीले लोनमा ल्याएका छौ । उनीहरु समेत सहजै स्विकार गरेर आए ।
केहि खेलाडी लोनमा ल्याएको कुरा छ । समय र खेलाडीको बिषयमा खुलाउन मिल्छ ?
हामीले ४ महिनाको लागि केही खेलाडी अनुबन्धन गरेका छौ । हामीले ४ महिना जति एएफसी कप खेल्नेछौ । त्यसपछि लिगमा खेलाडी फेरबदल भईहाल्नेछ ।
अन्तिममा मनाङको एएफसी कपमा लक्ष्य के हो ?
छनोट हुनेनै लक्ष्य हो । हामीले सुरुमा समुह चरण पार गर्ने लक्ष्य लिएका छाै ।
कतिको सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ ?
अहिलेनै भन्न सकिने अवस्था छैन । सबै टिम उत्कृष्ट छन् । सबै लिग च्याम्पियन भएर आएका हुन् । अरु टिम निकै राम्रो छन् भन्ने सुनेको छु । तर खेल हेरेको छैन । विदेशी खेलाडी समेत राम्रा छन् भन्ने सुनेको छु ।
उनीहरुको अलि बढी लगानी हुन्छ । सोही स्तरको खेलाडी लिएर आएको हुन्छ । नत्र दक्षिण एसियामा सबै टिम उस्तै उस्तै हुन् ।